Umculo kaNkiyase uletha ithemba | Scrolla Izindaba
UNkiyase Modlana-Mbatha omuhle ulwe ne-dyslexia yakhe waphendula isimo sakhe saba ngumculo onabalandeli abadansela umculo wakhe.
I-Dyslexia ukuphazamiseka okubandakanya ubunzima ekufundeni noma ukuhumusha amagama, izinhlamvu nezinye izimpawu.
Ekhuluma nabakwa-Scrolla.Africa ngoMsombuluko, lo mculi omuhle wase-Alexandra, eGoli uthe ukuze aqwashise abantu abanenkinga efanayo ufake izinselelo zakhe ezingomeni ukujabulisa abanye.
UNkiyase useneminyaka engaphezu kweyi-15 ejabulisa abantu. Uqale umsebenzi wakhe kwezomculo okhokhelwayo ekuqaleni konyaka wezi-2000 noKalawa Jazmee. Muva nje ukhiphe izingoma ezimbili ezibizwa ngeMatlakala okukhona kuzo ababili beqembu lomculo laseTshwane, i-Future Majesties kanti kwi-Nkarhi Wakona usebenze nomkhiqizi wodumo, uBheki Nqoko.
Uthe lezi zingoma zombili zamukelwe ngongqondongqondo bezimboni abathe wenze kahle.
“Yinto ethobisa kakhulu ukuthi iningi labantu engicula phambi kwabo bathanda umculo wami.”
UNkiyase obuye abizwe ngoSista Ntswembu uthe sekunesikhashana engakhiphi i-albhamu ephelele ngoba ubematasa nokwakha ibhizinisi lakhe. “Ngiyazi ukuthi abalandeli bami bahlala becela okwengeziwe ngomculo wami.
“Ngibuye nemisindo eminingi ku-albhamu yami entsha engizoyikhipha ekuqaleni konyaka ozayo,” uyasho.
Usebenzela ukukhipha i-albhamu yakhe yesithathu ebizwa nge-Nkarhi Wakona okusho ukuthi, sekuyisikhathi.
UNkiyase uphinde wathi umculo uyimboni eyinselele ngoba abantu abafanayo babhukhwa kaningi.
“Baningi abantu abasha abanamakhono kule mboni. Kodwa ngenxa yokuthi amagama abo awaziwa, bavalelwa ngaphandle,” uyasho.
Wakhipha ama-albhamu akhe amabili abizwa nge-Lebota ne-Mudar Ebom ekuqaleni kowezi-2000.
UNkiyase ubuye wagxila ekuqwashiseni okuncane kokukhubazeka kwengqondo okufana ne-dyslexia ezindaweni ezazincishwe amathuba lapho abantu bengaziswanga ngalesi sifo.
“Umculo wami uphethe nezingoma ezikhuthazayo zokukhuthaza abantu abakhubazeke ngokwengqondo ukuthi bangalokothi baphele amandla,” uyasho.
Inkampani kaNkiyase i-Momba Projects ibigxile ekungeneleleni kwezokuphepha kwe-Covid-19 ematekisini asetshenziswa ngabasebenzi nabafundi.